China Custom damba fanontam-pirinty sy ny mpanondrana Product | Evergreen
Custom damba pirinty
Ny fomba amam-panao sublimated Patch (na loko vita pirinty karatra) dia dingana tsy manam-paharoa izay hanatanterahany virtoaly tsary toetra. Ny dingana loko manome mari-pamantarana ny fomba amam-panao tsy manan-tsahala sublimated tsipiriany amin'ny mavitrika loko sy mazava ny misoko mangina sy mitohy feo. Ny maso mavitrika tampina toetra ireo dia na inona na inona ianao tsy toy ny nahita. Ny mpanjifa, mpanjifa na ny mpikambana ao amin'ny fikambanana dia azo antoka fa Eritrereto ireo ary izany no marika rehetra mikasika ny dia. Tsy ilaina ny hanisa loko. Loko ar ...
Ny fomba amam-panao sublimated Patch (na loko vita pirinty karatra) dia dingana tsy manam-paharoa izay hanatanterahany virtoaly tsary toetra. Ny dingana loko manome mari-pamantarana ny fomba amam-panao tsy manan-tsahala sublimated tsipiriany amin'ny mavitrika loko sy mazava ny misoko mangina sy mitohy feo. Ny maso mavitrika tampina toetra ireo dia na inona na inona ianao tsy toy ny nahita. Ny mpanjifa, mpanjifa na ny mpikambana ao amin'ny fikambanana dia azo antoka fa Eritrereto ireo ary izany no marika rehetra mikasika ny dia.
Tsy ilaina ny hanisa loko. Loko no fetrany. -Jato iray dia mitovy loko vidiny ambany dia ambany toy ny loko. Tsy misy hafa fiampangana mifototra amin'ny fandrakofam-baovao. Avy amin'ny 10% ny 100% fandrakofana, ny Patch dia mitovy vidiny ambany.
Pirinty natao tamin'ny mamela antsika hanao zavatra isan-karazany izay tsy azo atao amin'ny amboradara sy tenona, toy ny antsipirihany sy ny manam-petra-kolaka loko. Raha te misy mihetsiketsika Mombamomba-on-a-damba, ianao ihany no tsy maintsy mangataka pirinty, izay mamela ny fanapahan-kevitra kokoa ho amin'ny famolavolana. Evergreen Badges dia mirehareha ny ho matihanina ny mpitarika mpanamboatra ny tampina ny sublimation pirinty miaraka amboradara fanodinana.
Previous: Custom damba ho an'ny fanontam-pirinty
Next: Custom sublimatin sariitatra tampina
Pirinty natao tamin'ny Metal Badge
pirinty natao tamin'ny Applique
pirinty natao tamin'ny Badge
pirinty natao tamin'ny Crest
pirinty natao tamin'ny Emblem
pirinty natao tamin'ny Insignia
pirinty natao tamin'ny Patch
Sublimation fanontam-pirinty crests
Sublimation fanontam-pirinty crest
Manjaitra-on famindrana tampina
Chenille Varsity Letter T Patch, Hook Ary Loop mpanenona Badge , Chenille Patch Letters, peta-kofehy Badge, Chenille Letter Patches, Chenille Varsity Letter, rehetra Products- 粤ICP备18108880号-1